Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeWOSOS 3.2 uye tvOS 10.2 yemunhu wese | Ndinobva mac
Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeWOSOS 3.2 uye tvOS 10.2 yemunhu wese
Iyo nyowani vhezheni ye macOS Sierra 10.12.4 yakatoburitswa mushure memasere masere beta beta shanduro. Pamusoro peiyo nyowani software yeMacs, iyo yepamutemo vhezheni yeOSOSOS 3.2, tvOS 10.2 uye iOS 10.3 vakasunungurwawo. Saka isu tine ese emhando shanduro dziripo kare patinenge tichida kana kuwana nguva yekuzvimisikidza pachedu kugadzirisa zvese Apple zvishandiso. Mune ino kesi, izvo zvitsva zvinoitwa muwatchOS 3.2 ndiyo theatre mode uye SiriKit, kwete zvine simba zvikuru zviitiko asi zviri nani zvirinani pane izvo zvinopihwa neiyo nyowani tvOS 10.2 munyika medu.
Zviripachena kuti zano pano nderekudzikamisa zvakadzikama zvishandiso zvedu sezvo isiri vhezheni inowedzera shanduko huru kune zvatatova nazvo muchizvarwa chechina Apple Watch kana Apple TV, asi kana zvichikosha kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona kweinenge nakidzwa nekuvandudzwa mumidziyo.
Pamusoro pekugadziriswa kwetsikidzi, kugadzirisa dambudziko diki uye kugadzirisa kugadzikana kwesystem, "cinema mode" uye SiriKit zvinowedzerwa, zvishoma zvitsva izvo zvinonyatso kuuya zvinobatsira kune vashandisi vane Apple smart wachi. Kune rimwe divi isu tiri kufara kuti mushure mekumirira kwenguva yakareba vhezheni yekupedzisira isu tatova nayo kuti itorwe. Rangarira kuti mune iyo Apple Watch ndizvo zvakafanira kuti uve ne50% yebhatiri rakachaji uye zvinodikanwa ramba uchitarisa pane charger uchigadzirisa. Isu tinodawo kuve neiyo iPhone yakagadziridzwa kuti tikwanise kuisa iyi yazvino vhezheni yakaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa vhezheni yekupedzisira yeWOSOS 3.2 uye tvOS 10.2 yemunhu wese
Mapeji, Numeri uye Keynote akagadziridzwa achiwedzera mabasa matsva
Iyo yepamutemo vhezheni ye macOS Sierra 10.12.4 ine Night Shift yave kuwanikwa